Maanso: Haddaan sidaan ogahay, Maba soo Tahriibeen. | HALGANKA.NET
نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ Annagaa waxna noolaynna waxna dilla, xaggannagaana loo soo ahaan. HALGANKA.NET
There are currently 0 users and 631 guests online. Filimada/Videos
Submitted by admin on Tue, 09/01/2009 - 10:14
Maansadaan waxaan uga faalloonayaa guud ahaan Jidka dheer ee ay soo maraan Soomaalida u soo Tahriiba Dalka Talyaaniga, waxaan ku soo ban dhigayaa guud dhibaatooyinka la soo gudboonaada, waxay si qumman u tilmaamaysaa waxa ay kala kalmaan Dalalka ay soo maraan, waxay kaloo muujinaysaa wax ay kala soo gudboonaada Wadanka Talyaaniga, marka ay soo galaan ka dib, iyo sida ay u cabiraan dareenkooda.
Sodonkii gu'ee tagay iyo Beri samaadkii fogaa Waayihii la soo maray Nabad iyo samaanbaa Lagu wada salaysnaa.
Xilligaa suubanee Soomaalidu ku nooleed Socod badan iyo dhoof Saa looma xiisayn Suuqley ganacsatoo Salaydahaa dibadda Silcadaha u dhoofiya Ama soor ka keenoo Sidaa ku sii iibiyoo.
Ama siyaasi meteloo Soomaali danaheed Sahan ugu jiraayoo Sumcaddeeda dhawra Dibaddaa u socon jiray.
Sanadihii colaadaha Dalka ay ku saaqeeen Dadka ay si weyn iyo Saamayn ku reebeen.
Siliciyo dhibaatada Dagaalada sokeeyee Saameeyey noloshii Sabi iyo cirooliyo Say iyo afadiis Seedi iyo dumaashi Samo ay ka waayeen.
Hurdo salow ma noqotoo Seexashadii iyo gama'ii Soo jeed ma badaloo Subax waa dillaaciyo Saqda dhexe abeenkii Sare joog ku gaareen.
Saxarkiyo qaxarkaa Dadku socod ma doorteen Saamaha iyo tallaabada Ma la sii tallaabshoo Soodimaha ma laga gudbay.
Socdaalkii Muqdishiyo Hargaysiyo Saylac Laga soo billaabee Dalalkaa la soo maray Dariskuna surkii yahay Eratariya iyo Suudaan Shakaraab salkeediyo (Xero Qaxooti oo ku taal Sudan) Khartum la sal-dhigtaa.
Safar laga abaabulo Sodomeeyo qofood iyo Tiro ka sii badan Siible ama Cabdi-bile Lancaruser la saaraa Saxaraha u dhexeeya Libya iyo Suudaan Sidaa lagu abbaaraa.
Saxarahaa bidhaantiyo Ishu intay soo qabatiyo Sii muuqda cirifkiis Saro iyo Geedo maleh Sakadiyo Ceelal maleh Halaq iyo Subxaanyiyo Sulxashada Abeesada Jilbis baa susumayee!.
Dhamacduna sideedaba Soolar kugu dhagaayiyo So'da ay qabsanaysoo Sanku neefta gabayoo Sambabadu shaqaynayn.
Gaarigu subixii iyo Dharaar buu socdaayoo Qorax sii dhicii iyo Seqda dhexe habeenkii Shanqar maba sameeyoo Kama sikado gagadiis.
Silic iyo dhibkaa jira Sulmigiyo harraadka Seedaha iyo Halbowlahu Dhiigga maba sayriyoo Reer sabadka deganoo Ku sii her gashoo ma lohoo!.
Siigadiyo dabayshiyo Aaryada sanboorka leh Neecaaw silloon iyo Saxansaxo udgoon maleh!.
Seerahaa ballaarane Saamuhu ka quustee Inay sahal ku gooyaan Qofba sibuu ku marayoo Qolo sadax Maaloodbay Kaga soo gudbaanoo Qolo kale sodonkay xiraanoo Maalmo ku sii darsadaan Qolana sagaashan bay Saxaraha ku moodaan!.
Kufro soodinteeda (Magaalo ku taal Xadka Libya & Sudan) Marka la soo gaaraa Naftu soo laabataayoo Nolol la saadaaliyaa.
Xabsi sun ah Kafuuda dheh! (Xabsi xun oo ku yaal Magaalada Kufra!) Qofkii gala soomaw boxoo Sanaduu ku qaataa Sinjigaagu waa kee? Ma Soomaali baad tahay? Cidi maba su'aashoo Sidee tahay maba tiraa? Sab iyo Niik aan ka ahayn! (laba eray oo cay ah!)
Alfallaax iyo Suwaariyo (Al-falax & Aj-dabiya waa Xabsiyo ku kala Saleetin iyo Ajdaabiyo magaalooyinka Tripoli & Aj-dabiya, Inta Garabulle iyo Saawiya kale waa Magaalooyin laga boxo marka loo Xabsiyadaa siliciyo soo dhoofayo Talyaniga, waxaanaa ku yaal Sumcad xumadu taallee! xabsiyo xunxun!) Qofkaan soo marinee Maalmo aan ku soo jirin Tahriib maba soo marin!.
Safaaradda danaheed Soomaali u taagane Sida ay ku dhaqantiyo Balaan soo bandhigo Saadaal ka bixiyoo.
Waxay noqotay saylad lagu kala sabaaliyo Soomaalida habqankaa Dollar ma sidataa? Mise lagu soo diraa? Ha lagu soo daayee Safiirku waa dullaalka Ugu sarreeya giddigood Sonami yuu ku caan yahay Waxba sooma celiyoo Hamno iyo sad soo haray Midna maba saluugee!.
Salaxadin iyo Jansur ( Xaafado ku yaal Magaalada Tripoli). Suqul-madina iyo Dawra Soomaali-istaag iyo Sharqiya Dadbaa laga soo qabqabtoo Jeelbaa salka l dhogee!.
Dhibku intaa kuma sinnoo Doonbaa soo laabatiyo Laash ka sii horreeyaan Warkiisaba la soo helin.
Sicilia iyo Lampedusa (Laba Magaalo oo ku taalla xeebaha Koofureed Talyaanigii la soo galay ee Talyaniga oo laga soo xirto marka la soo Faqri iyo Saboolnimo galayo Talyaniga) Deeq aan sar-go'ayn iyo Cayr baa la sugayoo Waxse taa ka soko maray Haddaan sidaan ogahay Maba soo tahriibeen!.
Isteshinkoo la seexdiyo Dormitoriyo saaladdii (Dormitorio: waa eray Talyani ah Subaxoon dillaacin waa goob-jiifeed) Lagaa sii jarmaadini Siddeeda habeenimo iyo Fiidkii la soo gali Haddaan sidaan ogahay Maba soo tahriibeen!.
South Afrikaa dukaan iyo Suuq iiga furnaayoo Haddaan sidaan ogahay Maba soo tahriibeen!.
Xaawalad baan saami iyo Ku lahaa sad weynee Haddaan sidaan ogahay Maba soo tahriibeen!.
Layn baan sugaaayoo Kas uga soo tagayoo Haddaan sidaan ogahay Maba soo tahriibeen!.
Sandaqaddii Bakaaraha Sonkortiyo Bariidka Risiqii iga soo galayaa Sidaan ii dhaantayoo Haddaan sidaan ogahay Maba soo tahriibeen!.
Cunoo seexaan ku jiroo Senti layma waydiinayn Waxa aan u soo baxay Aniguba ma sixi karo! Haddaan sidaan ogahay Maba soo tahriibeen!.